Mgbasa ozi na e-commerce | ECommerce ozi ọma
na mkpọsa mgbasa ozi dị ezigbo mkpa na azụmahịa ọ bụla, ma elektrọnik ma ọ bụ ọdịnala, na azụmahịa igwe na-ewe nnukwu mkpa, n'ihi na enwere ọtụtụ nhọrọ na ịntanetị nke ndị ahịa anyị nwere ike dochie anyị, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na na mbido ọ dị ezigbo mkpa ime ka anyị mara onwe anyị ka ndị mmadụ wee webụsaịtị anyị. Lee ụfọdụ ndụmọdụ maka wulite iguzosi ike n'ihe nye ndị ahịa anyị nakwa na ihe ndị a na-enyere anyị aka ime ka a mata onwe anyị.
Mgbasa ozi na ahaziri-ahia nke onwe
El Ndụmọdụ bụ iji email dabere na nchekwa data; Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-eme ya, enwere ụfọdụ ihe anyị nwere ike ime ka ozi ịntanetị anyị dị iche na ndị ọzọ, otu n'ime nhọrọ ndị ahụ bụ izipu ọ bụghị naanị ozi nkwado, ma ọ bụrụ na ụfọdụ akwụkwọ ozi mmekọrịta maka onye ahịa anyị ịchọta ozi anyị na-atọ ụtọ karị; Ọzọ nhọrọ bụ ịjụ gị banyere ngwaahịa ị zụrụ n'aka anyị na a ozi banyere ihe dị ka nke a:
"Daybọchị a n'izu gara aga ị mechara zụta ngwaahịa a, ihe niile aghaa nke ọma ma ọ bụ na anyị nwere ike inyere gị aka?"
Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị otu ihe atụ bụ eziokwu na anyị na-echeta na ọ bụ ya nwetara kwuru ngwaahịa ga- dị mkpa na ụlọ ọrụ ahụ, na nke a ga-eme ka ha were anyị dị ka nhọrọ mbụ iji zụta ihe ọzọ ha ga-eme, gbasara ajụjụ a, ebumnuche bụ na onye ahịa ahụ maara na ha nwere anyị iji dozie ajụjụ ọ bụla, nke mere na ha nwere ọrụ ahịa ka mma; n’enweghị mgbagha, nke a ga - eme ka onye ahịa ahụ nwee nnukwu iguzosi ike n'ihe nye azụmahịa anyị n'ịntanetị.
Ọ bụ eziokwu na nke a dị n'elu chọrọ akụrụngwa pụrụ iche nke mere na ọ dị mkpa ka anyị jiri nlezianya nyochaa ohere ịmejuputa ụdị mgbasa ozi ndị a, nke ga-eme ka ndị ahịa anyị kọọrọ ndị ọzọ gbasara anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Mgbasa ozi na e-commerce